Biofield व्यक्ति साँच्चै अवस्थित - यो लामो वैज्ञानिक स्तर मा सिद्ध भएको छ। यो जो बस गर्न केही छ ती आविष्कार गर्ने परी कथा केही प्रकारको छ, कि लाग्छ छैन। बिन्दु हो कठिनाई संग कथित छ कुराहरू हामीलाई वरिपरि धेरै छ। यो आवश्यक छैन हामी बस जान र मेरो आफ्नै आँखाले हेर्न सक्नुहुन्छ किनभने केहि बस अवस्थित छैन भनेर प्रमाणित छ। एक व्यक्ति सुरुमा संज्ञानात्मक क्षमता सीमित। को आभा कसरी हेर्न एक व्यक्ति? यो सबै हुँदैन। तिनीहरूले यसलाई बन्द पुल गर्न सक्छन्? यो सम्भव छ, तर प्रयास धेरै पार्छन् हुनेछ।
को जैव-क्षेत्र के हो?
आभा (जो जैव-क्षेत्र हो) कारण ऊर्जा शरीर को विभिन्न प्रकार गठन गरिएको छ। यस्तो क्षेत्रहरू कुनै पनि जीवित प्राणी वरिपरि छन्। केही तिनीहरू एक विशेष रेशमको कोयो जस्तै। आफ्नो आकार - ovoid, हातमा तिनीहरूले धड्कने वेब सदृश।
मानव जैव-क्षेत्र धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो बिना भौतिक शरीर - यो सिर्फ एक जैविक ठूलो, जो एक सानो विश्वास छ।
मानव जैव समावेश etheric। यो ऊर्जा शरीर हाम्रो शारीरिक खोल घेरने छ। यसलाई हामी अंतर्ज्ञान र चेतना सँग सम्बन्धित छैन कि अरू सबै कुरा छन्, तिनलाई हाम्रो प्रवृत्ति सबै, धन्यवाद नियन्त्रण, र यो हाम्रो प्रकृति छ।
यो शरीर आवरण शरीर धेरै तंग छ। यसलाई केही ठाउँमा एक गुहा छ। यस्तो depressions एक व्यक्ति दुखाइ छ भनेर संकेत गर्छ।
दोस्रो क्षेत्र सूक्ष्म भनिन्छ। यसले हामीलाई भावना, भावना सबै किसिमका र अधिक अन्य हामीलाई जडान कि दिन्छ। मनपर्ने सूक्ष्म क्षेत्र (शरीर) र हामीलाई मदत गर्न र घृणा, र पराउँछु, र नाइँनास्ति।
एक व्यक्ति प्रेस यदि एक भावना वा भावना सूक्ष्म शरीर विकृत छ।
यो सूक्ष्म क्षेत्र, तपाईं मात्र होइन महसुस गर्न सक्छन्, तर पनि आफ्नो आँखा हेर्न विश्वास छ। यसको रंग को आधार मा, तपाईं मानिस निष्कर्ष विभिन्न प्रकारका गर्न सक्नुहुन्छ। बैजनी देखि पहेंलो-हरियो गर्न आभा आध्यात्मिक भएकाहरूलाई छन्। प्रायजसो एक धर्मको टाउको संग गएका गाढा नीलो एक आभा छ, चाहनुहुन्छ नगर्ने ती, उदात्त कुरा सोच्न रातो वा पहेंलो biofield छन्।
मान्छे प्रत्येक अन्य मात्र होइन फरक आभा रंग, यसको अन्य गुणहरू तर पनि। उदाहरणका लागि, संतृप्ति र चमक लागि।
मानव biofield मा पनि मानसिक क्षेत्र समावेश छ। यो के प्रतिनिधित्व गर्छ? यो आधारित हाम्रो मनोवृत्ति, हामी काम जो मा, हाम्रो विचार, विश्वास, मनोवृत्ति र यति मा छ।
वास्तवमा, हाम्रो सबै भाग्य एक मानसिक स्तर मा निर्णय गरिएको छ। हाम्रो विश्वास र विचार मात्र संसारको आकार, तर जीवन को बाटो मा हामीलाई पर्खिरहेको सबै। मानसिक क्षेत्रमा हामीलाई जडान के हो सार्वभौमिक मान।
कुनै पनि क्षेत्र, सिद्धान्त मा, परिवर्तन गर्न सकिन्छ। मुश्किल कुरा मानसिक प्रभाव थियो। हामी एक बच्चा छ कि ती प्रतिष्ठानहरु, मजबूत छन्। "Knock बाहिर" अनावश्यक अत्यन्तै कठिन।
रक्सी पिउने बन्न किस्मत छ मानिस - sopetsya, चोर्न किस्मत छ जो एक - चोरी। यो सबै अन्तरनिहित कहीं धेरै गहिरो लुकेका छन्। तिनीहरूले एक स्तर पुग्न गर्दैन मा छन्।
मानव जैव-क्षेत्र माथि सूचीबद्ध छ के को मुख्य रूप हुन्छन्। तर, हामी envelop र अन्य क्षेत्रहरू। atmanicheskom, buddhialnom र causal कुरा। तिनीहरूलाई Assigning अझै पनि साँच्चै निर्धारित छैनन्, तर तिनीहरूलाई के हामीलाई मानव बनाउँछ निहित कि विश्वास छ। मात्र Sages, अगमवक्ताहरू, मानिसहरू मनन गर्न जीवन समर्पित गर्ने चयन गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो सबै सार महसुस।
मानव biofield घटक धेरै छ। तिनीहरू सबै प्रत्येक अन्य संग जोडिएको छन्। एक क्षेत्रमा समस्या तुरुन्तै अन्य ती को उपस्थिति नेतृत्व। यो गहिरो एकाग्रता आवश्यक रूपमा, राम्रो अवस्था कठिन छ राख्नुहोस्। यसलाई बुझ्न तिनीहरूले हाम्रो शारीरिक अवस्था असर कसरी महत्त्वपूर्ण छ। यो एक परी कथा, तर वास्तविक वास्तविकता छैन।
नाम को रहस्य: यो नाम एलिस छ? नाम को मूल र प्रकृति
हीरा नाम। मूल्य र proishozheniya
बालिका लागि नाम Uliana को अर्थ के हो
तपाईंलाई थाहा पाउनुपर्ने: अपार्टमेन्ट को निजीकरण लागि प्रक्रिया
आक्रमण राइफल AR-15: सुविधा र फोटो
Opposites आकर्षित वा वृष पुरुष र महिला Scorpio को अनुकूलता
सेतो गर्मी: मस्तिष्क र शरीर को लागि निहितार्थ। delirium tremens को नतिजा
र कसरी खमीर के
कम्पनी रैनबैक्सी। ट्याब्लेटको
धातु को स्थापना को लागि निर्देशन। मुख्य चरणमा
Novinet - प्रयोगको लागि निर्देशन।